"စာပွခြင်း" ကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက် (၅)ချက် - Myanmar Network
"စာပွခြင်း" ကို ဖြတ်တောက်ဖယ်ရှားရန် အကောင်းဆုံး အကြံပြုချက် (၅)ချက်
Posted by Soe Soe Win on October 17, 2013 at 14:49 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
“စာပွခြင်း သည် အမေရိကန်စာရေးသားပုံ၏ ရောဂါပင်ဖြစ်သည်” လို့ William Zinsser က သူ၏ လက်ရာအမြောက်ဆုံး ဆောင်းပါးဖြစ်တဲ့ “On Writing Well” တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး “ကျွန်တော်တို့ဟာ မလိုအပ်သော စကားလုံးများ၊ လည်နေတဲ့ တည်ဆောက်မှုများ၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော ဇာချဲ့မှုများနှင့် အဓိပ္ပါယ်မဲ့သော ဗန်းစကားများထဲတွင် နေသော လူ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်”လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ “စကားလုံးများကို လိုအပ်တာထက် ပိုမသုံးပါနှင့်” ဆိုတဲ့ ရိုးရှင်းသော စည်းမျဉ်းလေးကို လိုက်နာခြင်းဖြင့် ပြည့်သိပ် ရှုပ်ပွနေတဲ့ ရောဂါကို ကုသနိုင်ပါတယ်။ (အနည်းဆုံးတော့ ကိုယ့်ရဲ့ စာစီစာကုံးမှာပေါ့။) ပြန်စစ်ပြီး တည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာ မရေရာသော၊ ထပ်နေသော၊ ကြီးကျယ်ခမ်းနားသော အသုံးအနှုန်းများကို ဖယ်ရှင်းပစ်ဖို့ ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် ပြောရရင်တော့ အသုံးမ၀င်တာတွေကို ရှင်းပစ်ပြီး ကျစ်လစ်ပြီး တိုတိုရှင်းရှင်းနှင့် လိုရင်းရောက်ပါစေ။
၁. ရှည်လျားသော ၀ါကျကဏ္ဍ (long clauses) များကို တိုပစ်ပါ။ (Reduce long clauses)
တည်းဖြတ်တဲ့အခါမှာ ရှည်နေတဲ့ ၀ါကျကဏ္ဍ(clauses)တွေကို တိုတောင်းသော စကားစု (phrase) များအဖြစ်သို့ လျှော့ချပစ်ပါ။
Wordy: The clown who was in the center ring was ridingatricycle. (ခလယ်ဝိုင်းထဲတွင်ရှိနေသော လူရွှင်တော်သည် သုံးဘီးစက်ဘီးကို စီးနေသည်။)
Revised: The clown in the center ring was ridingatricycle. (ခလယ်ဝိုင်းထဲက လူရွှင်တော်သည် သုံးဘီးစက်ဘီးကို စီးနေသည်။)
၂. စကားစုများကို လျှော့ချပါ။ (Reduce phrases)
ထိုနည်းတူစွာ စကားစုများကို စကားလုံးတစ်လုံးများအဖြစ်သို့ လျော့ချပါ။
Wordy: The clown at the end of the line tried to sweep up the spot light.(တန်း၏ နောက်ဆုံးမှ လူရွှင်တော်သည် ပရိသတ်၏ အာရုံကို ရယူရန် ကြိုးစားနေသည်။)
Revised: The last clown tried to sweep up the spotlight.(နောက်ဆုံး လူရွှင်တော်သည် ပရိသတ်၏ အာရုံကို ရယူရန် ကြိုးစားနေသည်။)
၃. ၀ါကျ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို အကျိုးမပြုသော အဖွင့်စကားလုံးများကို ရှောင်ပါ။ (Avoid empty openers)
There သည် ၀ါကျရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နှင့် မသက်ဆိုင်သောအခါ There is, There are နှင့် There were တို့ကို ၀ါကျ၏ အဖွင့်စကားလုံးများအဖြစ် အသုံးပြုခြင်းကို ရှောင်ပါ။
Wordy : There isaprize in every pack of Quacko cereal. (Quacko cereal ဘူးတိုင်းမှာ ဆုတစ်ခုစီ ပါရှိပါတယ်။)
Revised : A prize is in every box of Quacko cereal. (Quacko cereal ဘူးတိုင်းတွင် ဆုတစ်ခုပါပါတယ်)
Wordy : There are two security guards at the gate. (ဂိတ်မှာ လုံခြုံရေးအစောင့်နှစ်ဦး ရှိနေပါတယ်။)
Revised: Two security guards stand at the gate. (ဂိတ်မှာ လုံခြုံရေးအစောင့်နှစ်ဦး ရပ် နေပါတယ်။)
၄. အထူးပြုစကားလုံးများ (Modifiers)ကို အလွန်အကျွံ မသုံးပါနှင့်။ (Don’t overwork modifiers)
၀ါကျ၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ပို၍ ထူးကဲမှု မပေးနိုင်သော very really, totally နှင့် အခြားသော အထူးပြု စကားလုံးများကို အလွန်အကျွံ မသုံးပါနှင့်။
Wordy: By the time she got home, Merdine was very tired. (အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာ Merdine ဟာ အရမ်းကို ပင်ပန်းနေပါပြီ)
Revised: By the time she got home, Merdine was exhausted.(အိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ Merdine ဟာ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နေပါပြီ။)
Wordy: She was also really hungry. (သူဟာ တကယ်လည်း ဆာလောင် နေပါတယ်။)
Revised: She was also hungry (or famished). (သူဟာ ဆာလည်း နေပါတယ်။)
၅. ဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ကို အထောက်အပံ့မပြုသော အပိုစကားလုံးများကို ရှောင်ပါ်။ (Avoid redundancies)
လိုရင်းအဓိပ္ပါယ်ရောက်ရန်အတွက် အသုံးပြုထားသော စကားစုအပိုများကို တိကျသော စကားလုံးများဖြင့် အစားထိုးပါ။ အသုံးများသော ထိုစကားစုများ၏ စာရင်းကို လေ့လာပြီး၊ မလိုလားအပ်သော စကားလုံးများဆိုတာ မိမိအရေးအသား၏ အဓိပ္ပါယ်ကို ထူးထူးခြားခြား အထောက်အပံ့မပေးသော စကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကို မမေ့ပါနှင့်။ ၄င်းတို့သည် စာဖတ်သူအား ငြီးငွေ့စေတဲ့အပြင် စာရေးသူရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်မှ အာရုံပြောင်းသွားစေပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ၄င်းတို့ကို ဖြတ်ချခဲ့ပါ။
Wordy: At this point in time, we should edit our work. (ဒီအချိန်မှာတော့ ကျွန်တော်တို့ ရေးထားတဲ့ စာကို တည်းဖြတ်သင့်ပြီ။)
Revised: Now, we should edit our work. (အခု ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ စာကို တည်းဖြတ်သင့်ပြီ။)
Richard Nordquist ၏ Top5Tips to Cut the Clutter ကိုကိုးကားရေးသားထားပါသည်။
“စာပှခွငျး သညျ အမရေိကနျစာရေးသားပုံ၏ ရောဂါပငျဖွဈသညျ” လို့ William Zinsser က သူ၏ လကျရာအမွောကျဆုံး ဆောငျးပါးဖွဈတဲ့ “On Writing Well” တှငျ ဖျောပွထားပါသညျ။ ဆကျလကျပွီး “ကြှနျတျောတို့ဟာ မလိုအပျသော စကားလုံးမြား၊ လညျနတေဲ့ တညျဆောကျမှုမြား၊ ကွီးကယျြခမျးနားသော ဇာခြဲ့မှုမြားနှငျ့ အဓိပ်ပါယျမဲ့သော ဗနျးစကားမြားထဲတှငျ နသေော လူ့အဖှဲ့အစညျးတဈခုဖွဈပါတယျ”လို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။ “စကားလုံးမြားကို လိုအပျတာထကျ ပိုမသုံးပါနှငျ့” ဆိုတဲ့ ရိုးရှငျးသော စညျးမဉျြးလေးကို လိုကျနာခွငျးဖွငျ့ ပွညျ့သိပျ ရှုပျပှနတေဲ့ ရောဂါကို ကုသနိုငျပါတယျ။ (အနညျးဆုံးတော့ ကိုယျ့ရဲ့ စာစီစာကုံးမှာပေါ့။) ပွနျစဈပွီး တညျးဖွတျတဲ့အခါမှာ မရရောသော၊ ထပျနသေော၊ ကွီးကယျြခမျးနားသော အသုံးအနှုနျးမြားကို ဖယျရှငျးပဈဖို့ ကွိုးစားသငျ့ပါတယျ။ တဈနညျးအားဖွငျ့ ပွောရရငျတော့ အသုံးမဝငျတာတှကေို ရှငျးပဈပွီး ကဈြလဈပွီး တိုတိုရှငျးရှငျးနှငျ့ လိုရငျးရောကျပါစေ။
၁. ရှညျလြားသော ဝါကကြဏ်ဍ (long clauses) မြားကို တိုပဈပါ။ (Reduce long clauses)
တညျးဖွတျတဲ့အခါမှာ ရှညျနတေဲ့ ဝါကကြဏ်ဍ(clauses)တှကေို တိုတောငျးသော စကားစု (phrase) မြားအဖွဈသို့ လြှော့ခပြဈပါ။
Wordy: The clown who was in the center ring was ridingatricycle. (ခလယျဝိုငျးထဲတှငျရှိနသေော လူရှငျတျောသညျ သုံးဘီးစကျဘီးကို စီးနသေညျ။)
Revised: The clown in the center ring was ridingatricycle. (ခလယျဝိုငျးထဲက လူရှငျတျောသညျ သုံးဘီးစကျဘီးကို စီးနသေညျ။)
၂. စကားစုမြားကို လြှော့ခပြါ။ (Reduce phrases)
ထိုနညျးတူစှာ စကားစုမြားကို စကားလုံးတဈလုံးမြားအဖွဈသို့ လြော့ခပြါ။
Wordy: The clown at the end of the line tried to sweep up the spot light.(တနျး၏ နောကျဆုံးမှ လူရှငျတျောသညျ ပရိသတျ၏ အာရုံကို ရယူရနျ ကွိုးစားနသေညျ။)
Revised: The last clown tried to sweep up the spotlight.(နောကျဆုံး လူရှငျတျောသညျ ပရိသတျ၏ အာရုံကို ရယူရနျ ကွိုးစားနသေညျ။)
၃. ဝါကြ၏ အဓိပ်ပါယျကို အကြိုးမပွုသော အဖှငျ့စကားလုံးမြားကို ရှောငျပါ။ (Avoid empty openers)
There သညျ ဝါကရြဲ့ အဓိပ်ပါယျနှငျ့ မသကျဆိုငျသောအခါ There is, There are နှငျ့ There were တို့ကို ဝါကြ၏ အဖှငျ့စကားလုံးမြားအဖွဈ အသုံးပွုခွငျးကို ရှောငျပါ။
Wordy : There isaprize in every pack of Quacko cereal. (Quacko cereal ဘူးတိုငျးမှာ ဆုတဈခုစီ ပါရှိပါတယျ။)
Revised : A prize is in every box of Quacko cereal. (Quacko cereal ဘူးတိုငျးတှငျ ဆုတဈခုပါပါတယျ)
Wordy : There are two security guards at the gate. (ဂိတျမှာ လုံခွုံရေးအစောငျ့နှဈဦး ရှိနပေါတယျ။)
Revised: Two security guards stand at the gate. (ဂိတျမှာ လုံခွုံရေးအစောငျ့နှဈဦး ရပျ နပေါတယျ။)
၄. အထူးပွုစကားလုံးမြား (Modifiers)ကို အလှနျအကြှံ မသုံးပါနှငျ့။ (Don’t overwork modifiers)
ဝါကြ၏ အဓိပ်ပါယျကို ပို၍ ထူးကဲမှု မပေးနိုငျသော very really, totally နှငျ့ အခွားသော အထူးပွု စကားလုံးမြားကို အလှနျအကြှံ မသုံးပါနှငျ့။
Wordy: By the time she got home, Merdine was very tired. (အိမျပွနျရောကျတဲ့အခါမှာ Merdine ဟာ အရမျးကို ပငျပနျးနပေါပွီ)
Revised: By the time she got home, Merdine was exhausted.(အိမျပွနျရောကျတဲ့အခြိနျမှာ Merdine ဟာ ပငျပနျးနှမျးနယျနပေါပွီ။)
Wordy: She was also really hungry. (သူဟာ တကယျလညျး ဆာလောငျ နပေါတယျ။)
Revised: She was also hungry (or famished). (သူဟာ ဆာလညျး နပေါတယျ။)
၅. ဆိုလိုရငျးအဓိပ်ပါယျကို အထောကျအပံ့မပွုသော အပိုစကားလုံးမြားကို ရှောငျပျါ။ (Avoid redundancies)
လိုရငျးအဓိပ်ပါယျရောကျရနျအတှကျ အသုံးပွုထားသော စကားစုအပိုမြားကို တိကသြော စကားလုံးမြားဖွငျ့ အစားထိုးပါ။ အသုံးမြားသော ထိုစကားစုမြား၏ စာရငျးကို လလေ့ာပွီး၊ မလိုလားအပျသော စကားလုံးမြားဆိုတာ မိမိအရေးအသား၏ အဓိပ်ပါယျကို ထူးထူးခွားခွား အထောကျအပံ့မပေးသော စကားလုံးတှဖွေဈတယျဆိုတာကို မမပေ့ါနှငျ့။ ၎င်းငျးတို့သညျ စာဖတျသူအား ငွီးငှစေ့တေဲ့အပွငျ စာရေးသူရဲ့ ရညျရှယျခကျြမှ အာရုံပွောငျးသှားစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ ၎င်းငျးတို့ကို ဖွတျခခြဲ့ပါ။
Wordy: At this point in time, we should edit our work. (ဒီအခြိနျမှာတော့ ကြှနျတျောတို့ ရေးထားတဲ့ စာကို တညျးဖွတျသငျ့ပွီ။)
Revised: Now, we should edit our work. (အခု ကြှနျတျောတို့ရေးထားတဲ့ စာကို တညျးဖွတျသငျ့ပွီ။)
Richard Nordquist ၏ Top5Tips to Cut the Clutter ကိုကိုးကားရေးသားထားပါသညျ။
Permalink Reply by Mr Lwin Tunn on October 22, 2013 at 20:05
I'd like your discussions,thanks sir!
Permalink Reply by Khine Zin Oo on October 23, 2013 at 9:56
Permalink Reply by Htake Htar Myat on October 23, 2013 at 11:24
Permalink Reply by sat yi phyo on October 23, 2013 at 13:24
Permalink Reply by Htoo Rein Lwin on October 29, 2013 at 13:30
Permalink Reply by tancuiming on November 1, 2013 at 8:01
Permalink Reply by Aung Zaw Oo on October 24, 2015 at 16:37